ဆောက်လုပ်မှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ACP ထုတ်လုပ်သူနှင့်တရုတ်ပြည်သို့တင်ပို့သူသည်အနှစ် ၂၀ ကျော်
ငြမ်း H ကို Frame က
ပျဉ်ပြား (Catwalk) & လှေကား
၂၀၂၁၊ မေလ ၁ ရက်နောက်ပိုင်းမှာဘာကြောင့်သံမဏိဈေးတက်ရတာလဲ။
အဓိကအကြောင်းပြချက်： ၁။“ ကာဗွန်ဒြပ်ထုနှင့်ကာဗွန်ကြားနေရေး” သည်တရုတ်နိုင်ငံအားကမ္ဘာကြီးအတွက်အလေးအနက်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောစီမံကိန်းများကိုပြတ်ပြတ်သားသားစွန့်ပစ်ရမည်။ ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းသောစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
ringlock ငြမ်းတည်ဆောက်ပုံ။ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အီဂျစ်၊
အဆိုပါ ringlock ငြမ်းသစ်တစ်ခုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ringlock ငြမ်းများကိုလည်း disc lock scaffolding, rosette ringlock scaffolding နှင့် layher scaffolding စသည်ဖြင့်ခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများဖြစ်သော Viaducts, tunnels, စက်ရုံများစသဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားပြီး ...
အရှေ့တောင်အာရှတွင် ringlock ငြမ်း၏ application field
အရှေ့တောင်အာရှရှိ ringlock ငြမ်း၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ringlock ငြမ်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်ကို“ ringlock ring plate” တွင်ဖော်ပြထားသည်၊ ငြမ်းဝင်ရိုးစွန်းကိုပန်းကန်ဖြင့် welded ပြုလုပ်ထားသည်။ အလျားလိုက်အားဖြင့်ပူးတွဲတပ်ဆင်ထားပြီးကြိုးအား connector အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ တစ် ဦး ri ...
အဓိကရှုထောင့် - ထောက်ပံ့ရေးဘက်မှကြည့်လျှင်ပြည်တွင်းသံမဏိထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်ကြားနေသည့်ဗျူဟာမြောက်မူဝါဒအားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိသည်။ ကာလတိုတွင် Tangshan နှင့် Shandong သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည်အနားယူပါမည်။
ဆောက်လုပ်ရေးပုံသဏ္-ာန် -6 ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအထပ်သားပုံစံ
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအထပ်သားပုံသဏ္-ာန်ပုံသဏ္-ာန်တည်ဆောက်ခြင်း၏ ၆ သွင်ပြင်လက္ခဏာများသစ်သားရင်ပြင်များနှင့်ပုံသဏ္workာန်များသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ဘဏ္twoာရေးနှစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအထပ်သားတည်ဆောက်ခြင်းပုံစံသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခဲ့ပြီးအဓိကသစ်ပင်မျိုးစိတ်များမှာယူကလစ်ပင်နှင့်ပေါ့ပလာပင်ဖြစ်သည်။ The ap ...
မျက်စိကန်းသောစျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ringlock scaffolding ကို ၀ ယ်သောအခါသင်ဤအချက်များကိုအထူးဂရုပြုရမည်။
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနေ့က၊ ဗွီဒီယိုထဲမှာအလုပ်သမားတစ်ယောက်ဟာ disk ကိုသံမဏိပိုက်နဲ့နှိပ်နေတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ နှစ်ခုခေါက်ပြီးနောက်, disc ကိုသိသာကျိုးပဲ့ခဲ့သည်။ ringlock အမျိုးအစားငြမ်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ringlock disc သည်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငြမ်းထူထောင်သောအခါ, ပိုက်နှင့် couplers ကိုက်ညီဖို့ဘယ်လို?
ငြမ်းထူထောင်သောအခါ, ပိုက်နှင့် couplers ကိုက်ညီဖို့ဘယ်လို? သင်ဟာ cuplock, ringlock, cross-lock စသည်တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော်စျေးဝယ်ခြင်း၊ ကုန်ကျခြင်း၊ လက်တွေ့ကျခြင်းနှင့်အဆင်ပြေစေရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းတို့အတွက်, coupler-type အမျိုးအစားသံမဏိပိုက်ငြမ်းသည်စျေးကွက်အများစုတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ringlock ငြမ်းသည် cuplock ငြမ်းထက်ကောင်းသည်လား။
ringlock ငြမ်းသည် cuplock ငြမ်းထက်ကောင်းသည်လား။ ringlock ငြမ်းနှင့် cuplock ငြမ်းများသည်သစ်ခုတ်ခြင်းပုံစံအသစ်များဖြစ်ပြီးနှစ်မျိုးလုံးကို support formwork အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုမကြာခဏနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်၊ သို့သော်လူအများစုက ringlock ငြမ်းသည် cuplock sca ထက်ပိုကောင်းသည်ဟုထင်ကြသည်။
သွပ်ရည်စိမ်သည့်သစ်သားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် ပို၍ လူကြိုက်များသော ringlock ငြမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ringlock ငြမ်း၏အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ကိုပူနွေးအောင်သွပ်ပြုခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလုပ်ငန်းသက်တမ်းမှာ ၁၅ နှစ်အထိရှိသည်။ ringlock ငြမ်းများသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးထိရောက်မှုများစွာရှိသည်။ အဲဒါကို disassemble လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် ...
ringlock ငြမ်းတည်ဆောက်ပုံ။ လူ ဦး ရေ ...
ringlock ငြမ်း၏ application field ...
Kwikstage ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ချိန်ညှိအဆောက်အ ဦး သံမဏိ propps, ငြမ်း Adjustable ဝက်အူဂျက်, အကြီးစား Duty Ringlock ငြမ်း, Ringlock ငြမ်းအစိတ်အပိုင်းများ, Ringlock ငြမ်းကွင်းခတ်,